Home Wararka Maleeyshiyo beeleedkii ku dagaalamay Saax-maygaag oo lakala qaaday
Maleeyshiyo beeleedkii ku dagaalamay Saax-maygaag oo lakala qaaday
Guddi nabadayn ah oo Puntland u xilsaartay colaadda Saax maygaag iyo Sange jebiye ayaa ku guulaystay in ay kala qaadaan labadii maleyshiyo beeleedkii ee isku horfadhiyay deegaannadii dhowaan lagu dagaalamay. Guddiga nabadaynta ayaa sheegay in ay masaafo 30km dib u durkiyeen malayshiyada, si looga hortago isku dhac kale oo dhex mari kara labada dhinac.
Deegaannada laga saaray maleyshiyo beeleedka ayaa la geynayaa ciiddamo katirsan maamulka Puntland si ay u xoojiyaan nabada, iyadoo laga ambaqaadayo go’aannadii nabadeed ee dhawaan la dhex dhigay labada beel ee walaalaha ah. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku geeriyooday dagaalkii dhawaan ka dhacay deegaanka Saax maygaag, dagaalkaas oo salka ku hayay muran ka dhashay deegaamaynta Saax maygaag.
Previous articleBooliiska Puntland oo gacanta ku dhigay qof loo eedaysan dilkii Cabdikaafi Cabdixafiid
Next articleNin dhalasho – Soomaali ah oo Wasiir looga magacaabay dalka Tanzania
Qaxooti farabadan oo soogaaray Soomaaliya